Inona ny atao hoe Advertising Native? | Martech Zone
Zoma, Martsa 3, 2017 Douglas Karr
Araka ny nofaritan'ny FTC, ny dokam-barotra zanatany dia mamitaka raha misy diso ny fanehoana hevitra na misy aza fanalana vaovao izany dia mety hamitaka ny mpanjifa manao zavatra mety amin'ny toe-javatra. Fanambarana voafaritra tsara izany, ary tsy azoko antoka fa te hiaro tena amin'ny fahefan'ny governemanta aho.
Ny Commission Federal Trade dia mamaritra izany teratany dokam-barotra toy ny atiny rehetra izay misy itovizany amin'ny vaovao, lahatsoratra asongadinina, fanadihadihana vokatra, fialamboly, ary fitaovana hafa manodidina azy an-tserasera. Doka momba ny zanatany FTC: Torolàlana ho an'ny orinasa
Taona lasa, Lord & Taylor dia nandoa 50 mpanao fitaomana lamaody an-tserasera handefa sary Instagram azy ireo manao akanjo paisley mitovy amin'ilay fanangonana vaovao. Saingy, tsy nahavita nanambara izy ireo fa manana izany nomena tsirairay ny fitaomana ny akanjo, ary koa dolara an'arivony, ho takalon'ny faneken'izy ireo. Ny fanitsakitsahana tsirairay izany tsy fisian'ny fanambarana izany dia mety hiteraka sazy sivily hatramin'ny 16,000 $!
Maherin'ny ampahatelon'ny mpanonta haino aman-jery nomerika no tsy mifanaraka amin'ny fitsipiky ny FTC mifehy ny doka misy ny vohikala sy ny atiny tohanan'ny, araka ny filazan'ny a fandalinana navoakan'ny MediaRadar tamin'ity herinandro ity.
Ny antony maha-zava-dehibe ny famoahana
Ny famoahana ny dokambarotra momba ny tany dia lalàna any Etazonia sy any amin'ny firenena maro hafa. Saingy ny famoahana fifandraisana amin'ny marika dia tsy olana ara-dalàna fotsiny, fa ny fifampitokisana. Betsaka ny mpivarotra no mino fa mety hisy fiatraikany amin'ny taham-panovana ny famoahana izany, saingy tsy mbola nahita izany isika. Ny mpamaky anay dia niaraka taminay nandritra ny folo taona ary matoky fa, raha mamoaka tolo-kevitra momba ny vokatra aho, dia manao izany miaraka amin'ny lazako eo amin'ny laharana.
Ny mangarahara amin'ny mpanjifa dia manakiana, ary ny sombim-panentanana dia tsy tokony hanome sosokevitra na tsy hidika amin'ny mpanjifa fa zavatra hafa izy ireo fa tsy doka. Raha ilaina ny fisamborana hisorohana ny famitahana dia tsy maintsy mazava ny fanambarana ary tokony ho malaza izy io. Adama Solomona, Michelman sy Robinson
Tsy hanao vivery ny aiko mihitsy aho. Raha ny marina dia nangataka saika isan'andro hamoahana lahatsoratra aho ary hahazo karama amin'ny backlink ary avelako izy ireo. Indraindray, ny masoivoho aza manana fahasaharana hangataka ahy handefa zavatra tsy misy ambara. Manoratra azy ireo indray aho ary manontany azy ireo hoe nahoana izy ireo no mino fa tsy maninona ny fandikan-dalàna federaly… ary manjavona izy ireo ary tsy mamaly mihitsy.
Ny mpiara-miasa Chad Pollitt dia namoaka ny Landscape momba ny haitao momba ny haitao 2017 ary tena zava-bita tokoa izany, namakivaky ireo fantsona sy teknolojia rehetra voataona sy voakasiky ny dokam-barotra zanatany.
Araka ny tatitra vao navoakan'ny MediaRadar, Mpitondra sy lesona amin'ny dokambarotra zanatany, avo lenta ny fananganana sy fangatahana dokam-barotra zanatany miaraka amin'ny 610 eo ho eo ny mpanao dokambarotra vaovao mampiasa vahaolana atiny manokana isam-bolana.
Tatitry ny fironana momba ny dokambarotra MediaRadar
Tags: Adama SolomonafamborahanaftcFampahalalana ftcInfluencersLord & TaylorMichelman sy Robinsonteratany dokam-barotra
Zencastr: Soraty mora foana ny dinidinika Podcast-nao amin'ny Internet
Inona no atao hoe Neuro Design?